राष्ट्रव्यापी गजलमा भोजपुरका पर्शुराम उत्कृष्ट - Arunkhabar.com
प्रकाशित : ७ माघ २०७४, आईतवार १८:५१
विराटनगर, ७ माघ । Erectalis online, cheap dapoxetine. विराटनगरमा आज आयोजित राष्ट्रव्यापी खुल्ला गजल प्रतियोगितामा भोजपुरका पर्शुराम कार्की उत्कृष्ट भएका छन् । कार्यक्रममा वाचन गरिएका २० गजललाई पछि पार्दै भोजपुर षडानन्द नगरपालिका ५ का कार्कीको गजल उत्कृष्ट बन्न सफल भएको हो ।
अन्य प्रतिष्पर्धीलाई उछिनेका कार्कीले मनमा चिन्ता र डर छ दुःखका कुरा, सीमानामा घर छ दुःखका कुरा भन्दै गजलका शेर सुरु गर्दा समर्थनमा अन्य सहभागीबाट तालीका पर्रा छुटेका थिए ।
प्रथम स्थान हाँसिल गरेका उनले सात हजार रुपैयाँ नगद, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे । प्रतियोगितामा धादिङका प्रदीप पोखरेल द्धितिय भए । झापाका कुशल गाउँले र मोरङ विराटनगरकी मञ्जु श्रेष्ठ तृतिय बने । झापाकी दृष्टिविहीन साहित्यकार सिर्जना बराल सान्त्वना भइन । प्रतिष्प्रधाका लागि मुलुकभरबाट ९७ वटा गजल प्राप्त भएका थिए ।
३० वटा गजललाई वाचनका लागि अनुमति दिइएको थियो । जसमा १० स्रष्टा उपस्थित हुन सकेनन् । प्रतियोगितामा बरिष्ठ साहित्यकार दिनेशराज सुवेदी ‘दिङ्लाली कान्छो’ र हरि कट्टेलले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । प्रतियोगिताका विजेताहरुलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी बरिष्ठ साहित्यकार रमाप्रसाद रिजाल, प्राज्ञ एवं समालोचक दधिराज सुवेदी, मधु पोखरेल, बरिष्ठ संगीतकार शक्ति वल्लव, बीएफएमका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्देशदाश श्रेष्ठ लगायतले नगद पुरस्कार, मेडल र प्रमाण पत्र प्रदान गरे ।
बीएफएम ९१.२ ले आफ्नो १२ औं वार्षीकउत्सवका अवसरमा राष्ट्रव्यापी गजल प्रतियोगिताको आयोजना गरेको एफएमका कार्यकारी निर्देशक डा. सन्देशदाश श्रेष्ठले जानकारी दिनु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘हामी संधै साहित्यिक यात्रामा नयाँ उर्जा र उत्साह थपिरहने छौं । साहित्यिक कार्यक्रमलाई संधै निरन्तरता दिइरहने छौं ।’fluoxetine
काठमाण्डौं, ८ कात्तिक । देशभरका ७५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समितिमा सूचना प्रविधि...